Xildhibaano Maalin ka hor laga baajiyay Safar oo maanta Muqdisho ka dhoofay – SBC
Xildhibaano Maalin ka hor laga baajiyay Safar oo maanta Muqdisho ka dhoofay
Magaalada Muqdisho Maanta waxaa ka dhoofay xildhibaano maalin ka hor laga baajiyay safar ay uga amba bixi lahaayeen dalka dibadiisa kuwaas oo isugu jira kuwo u socda howlo shaqo iyo kuwo xaalado caafimaad u socda.
Safarka Xildhibaanada ayaa waxa uu ku saleysanyahay kulamo iyo siminaaro ay magaalada Nairobi xarunta dalka kenya ku soo qaadan doonaan ,
Si nabad ah ayay xildhibaanadani ugaga amba bexeen Garoonka diyaaradaha Magaalada Muqdisho, waxaana saxaafada la hadlay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada amababaxay kaas oo sheegay in si nabad ah ay uga dhoofeen halkaasi .
Xildhibaanadan ayaa maalin ka hor waxaa lagu sameeyay xanibaad dhanka socdaalka ah markii wasaarada socdaalka DKMG ah ay soo saartay go’aan loogaga joojinayo safarkooda, waxayna taasi dhalisay isjiijiid dhexmaray golayaasha DKMG ah .
Waxaa lagu tilmaamay arinka xukuumada FKMG ah ay ku dhaqaaqday mid aan ku wanaagsaneyn xoriyatul qowlka islamarkaana waxaa cambaareeyay dhinacyo badan oo ka kala tirsan Beesha caalamka iyo mudane yaasha Baarlamanka inkastoo aan jirin wax ka soo baxay dowlada KMG ah marka laga reebo in ay ku adkeysatay arimaha ay ku dhaqaaqday in ay sax yihiin.
Sikastaba ha ahaatee safarka Xildhibaanadan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya gaar ahaan gudi ka tirsan Baarlamanka oo loo xilsaaray doorashooyinka August dhacaya sida uu Baarlamanku sheegay ayaa ahaa kuwo horay loo sii shaaciyay saaka iyadoona la sheegay in aanay dhicidoonin sida haatan dhacdayba is hor istaag lagu sameeyo safarkooda.